Nin afartan jir ah oo kufsaday gabar shan jir ah oo xiran sida uu sheegay xeer ilaaliyaha… – Hagaag.com
Nin afartan jir ah oo kufsaday gabar shan jir ah oo xiran sida uu sheegay xeer ilaaliyaha…
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir oo ka hadlay Shirweynaha Qaran ee Haweenka Soomaaliyeed ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in mudooyinkii u dambeeyay ay soo kordhayeen tacadiyada ka dhanka ah Haweenka.
Waxa uu soo hadal qaaday Kiisaska la xiriira kufsiga oo todobaadyadii u dambeeyay ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolada dalka, isagoo sababta ku sheegay in aysan cadaalad dhab ah helin kuwa gabood falada u geysta Gabdhaha.
Axmed Cali Daahir ayaa sheegay inuu xabsiga dhexe ee Xamar uu ku xiran yahay nin 40 sano jir ah, kaasoo loo heysto kufsi uu u geystay gabar aad u da’yar oo 5 sano jir ah.
“Nin Afartan Jir ah waaye xooggiisa aniga koleey wuu ikala jabin karaa, gabar yar oo shan jir ah ayuu kufsaday, waa xiran yahay hada wuxuu ku jiraa xabsiga”ayuu yiri Axmed Cali Daahir
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir ayaa sidoo kale sheegay in arinta layaabka ku leh kiiskaasi xanuunka badan ay tahay in labada Waalid ee ilmaha la dhibaateeyay ay dalbanayaan in la sii daayo dambiilaha tacadigaas u geystay gabadha yar ee Shan sano jirka ah.
“halkan waxaa ku jira hooyadii iyo aabihii iyo ehelkii oo leh waan heshiinee hala sii daayo, tani waa Kiis jira” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xeer ilaaliyaha qaranka.
Hay’adaha garsoorka inay shaqooyinkooda qabsadaan ayuu sheegay inay ka hortaagan yihiin dad masuuliyiin ah oo daba socda dambiilayasha ay soo xiraan Ciidamada Amniga.
“Xeer illaalinta maso oogi karto dambi sababto ah marka arrinta u timaado kiiska waxaa daba socda Xildhibaano, Senataro , Hogaamiyaal qabiil, waalidka gabadha dhibanaha ah iyagoo sheegaya in kiiska ka laabteen hab qabiil loo xaliyay , taasina keentay in kiiska goobta ku baaba’o , ama Abuukaataha eedeysanaha ku doodo maadaama dambi cadeymo laheynin la siidaayo eedeysanaha.”ayuu hadalkiisa ku soo xiray xeer ilaaliyaha qaranka.